आइफोनको ब्याट्री कसरी स्वस्थ राख्ने ? ब्याट्रीको स्वास्थ्य कसरी जाँच्ने ? यी हुन् उपयोगी टिप्स — Imandarmedia.com
१राष्ट्रपतिले पत्रकारलाई मुख छाडेपछि चौतर्फी आलोचना
२सेनाले एकाएक राष्ट्रपतिलाइ नियन्त्रणमा लियो, देशभर तरङ्ग
३जसपामा अशोक राई बने किङ मेकर
४विमान चार्टर गरेर नेपाल फर्किदै बर्षमान पुन
५खुला ठाउमै सम्भोग गरिरहेको देखेपछि घुम्न आएकाहरुले गरे रामधुलाई
६निर्वाचन आयोगका कारण राजनीतिमा उथलपुथल, एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य पनि कोल्याप्स
७विमानको पाङ्ग्रामा लुकेर यात्रा गर्ने व्यक्ति जीवितै फेला, प्रहरी समेत चकित
८प्रधानमन्त्रीले गरिन आफ्नो बिहे स्थगित, यस्तो कारण थाहा पाउने सबै चकित
९जसपामा लफडा, समानान्तर कमिटी गठन
१०चीन-ताइवान युद्ध भयो भने के होला ?
११खोप कार्ड हराए के गर्ने ? यस्तो छ तरिका सबैले थाहा पाउनु पर्ने
१२कुलमानले एकाएक चाले यस्तो कदम, देशभरबाट प्रशंसा
आइफोनको ब्याट्री कसरी स्वस्थ राख्ने ? ब्याट्रीको स्वास्थ्य कसरी जाँच्ने ? यी हुन् उपयोगी टिप्स
काठमाडौं । एप्पलका डिभाइसहरु आइफोन, आइप्याड, म्याक तथा एप्पल वाच लगायतमा ब्याट्रीको क्षमता तथा गुणस्तर अब्बल नै हुन्छ । तर विगतमा एप्पलमाथि पूराना मोडेलका आइफोनहरु नियतबस स्लो बनाएको आरोप लाग्यो ।
अपरेटिंग सिस्टममा गरिएको नयाँ अपडेटलाई पूराना मोडेलका आइफोनको ब्याट्रीले सहजै धान्न नसक्ने र त्यसका कारण आइफोन एक्कासी बन्द हुने समस्या नआओस् भनेर एप्पलले जानीजानी पूराना मोडेलका आइफोनहरु स्लो बनाइदिएको खुलासा भयो । यसलाई ब्याट्रीगेट काण्ड भनिन्छ । यसबाट एप्पललको प्रतिष्ठामा धक्का मात्र पुगेन उसले ११ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्यो ।
दीर्घकालीन समयसम्म ब्याट्रीको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्न त्यसो गरेको जिकिर गर्ने एप्पलले त्यसयता आफ्ना डिभाइसमा ब्याट्री तथा पर्फर्मेन्स व्यवस्थापन फिचर्स थप गरेको छ । साथै उसले प्रयोगकर्तालाई आफ्ना डिभाइसको ब्याट्रीलाई स्वस्थ राख्ने टिप्स तथा सुझावहरु पनि शेयर गर्ने गरेको छ ।
एप्पलले दिने त्यस्ता सल्लाहहरुमा सबैभन्दा पछिल्लो सफ्टवेयर अपडेट गर्ने, सिधै उच्च तापक्रमबाट बँचाउने, मोबाइल चार्ज गर्दा कतिपय प्रकारका खोलहरु निकाल्ने, लामो समयसम्म थन्काउनु परेमा आधाजसो मात्र चार्ज गरेर राख्ने आदि ।
एप्पलले आफ्नो पेजमा उल्लेख गरे अनुसार आफ्नो आइफोन तथा आइफोनको ब्याट्रीको आयूलाई अधिकतम बनाउनका लागि यी उपाय अपनाउनु पर्दछः
१. आइफोन अपडेट गर्नुहोस्ः
आइफोनको Settings अप्सनमा जानुहोस्, Generals मा ट्याप गर्नुहोस्, त्यहाँ रहेको Software Update अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाइँले उपलब्ध अपडेटहरुको सूचि देख्नुहुन्छ । यदि कुनै नयाँ अपडेट त्यहाँ देखिएमा त्यसमा ट्याप गर्नुहोस् र तपाइँको फोनको सफ्टवेयर अपडेट हुन सुरु हुन्छ । तर सफ्टवेयर अपडेट गर्दा आफ्नो आइफोनमा पर्याप्ट ब्याट्री चार्ज हुनु पर्दछ ।
तपाइँले आफ्नो आइफोनलाई कम्प्युटरमा जोडेर पनि आइट्यून्सको पछिल्लो भर्सन अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ । आइफोनको ब्याट्री लाइफ बँचाउनका लागि स्क्रिनको चम्किलोपना ठिक्क मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । तपाइँले आइफोनको चम्किलोपनालाई केही धमिलो बनाउन सक्नुहुन्छ वा अटो ब्राइटनेस फिचर अन गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागिः
Control Center खोल्नुहोस्, ब्राइटनेस स्लाइडरलाई पिँधसम्म तान्नुहोस्, अटो ब्राइटनेस फिचर सक्रिय बनाउनका लागि Settings मा जानुहोस्, त्यसपछि General मा जानुहोस्, Accessibility मा ट्याप गर्नुहोस्, Display Accommodations मा गएर Set Auto Brightness लाई On गर्नुहोस् ।
Low Power Mode सक्रिय बनाउने जब तपाइँको मोबाइलको ब्याट्री चार्ज सकिन थाल्दछ तब तपाइँले यो फिचर सक्रिय बनाउन सक्नुहुन्छ । जब ब्याट्री चार्ज २० प्रतिशतभन्दा तल झर्दछ तब तपाइँले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि मात्र एक ट्यापमा तपाइँले Low Power Mode सक्रिय बनाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागिः Settings मा जानुहोस् । स्क्रोल डाउन गरेर Battery अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस्।
त्यहाँ रहेको Low Power Mode मा इल गर्नुहोस् । ब्याट्रीको चार्ज बँचाउनका लागि आइफोन प्रयोगकर्ताले Background App Refresh तथा Location Servies जस्ता फिचरहरु पनि बन्द गर्न सक्छन् । Background App Refresh बन्द गर्नका लागिः Settings मा जानुहोस् । Generalमा ट्याप गर्नुहोस । Background App Refresh मा ट्याप गर्नुहोस् अनि त्यसमा रहेको इाा विकल्प छान्नुहोस् ।
यसो गर्दा पृष्ठभूमिमा एपहरु आफै रिफ्रेस हुने क्रम रोकिन्छ र ब्याट्रीको चार्ज रित्तिने क्रम केही सुस्त हुन्छ । एपहरुको Locations Service कसरी बन्द गर्ने ? Settings मा जानुहोस् । Privacy मा ट्याप गर्नुहोस् । त्यसभित्र रहेको Location Service मा जानुहोस् । त्यहाँ तपाइँले Location सर्भिस उपयोग गरिरहेका एपहरुको सूचि देख्नुहुन्छ र तिनीहरुसँगै त्यो बन्द गर्ने Off टगल पनि देख्नुहुन्छ ।
त्यहीँ Off मा थिच्नुहोस् । यसो गरिसकेपछि ती एपहरुले Locations फिचर प्रयोग गर्न पाउँदैनन् र ब्याट्री खपत कम हुन्छ । ब्याट्रीको स्वास्थ्य कसरी थाहा पाउने ?
आफ्नो आइफोनको ब्याट्रीको स्वास्थ्य थाहा पाउनु निकै महत्वपूर्ण कुरा हो किनकी यसले तपाइँको आइफोनको ब्याट्री फेर्नुपर्ने समय भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लाग्दछ । ब्याट्री हेल्थ कमजोर भन्नुको अर्थ तपाइँको आइफोनको ब्याट्री चार्ज खप्दैन र छिटो छिटो रिचार्ज गरिरहनु पर्दछ । सन् २०१३ मा लञ्च भएको आइओएस ११.३ बाटै एप्पलले आइफोनको ब्याट्री हेल्थ परीक्षण गर्न सकिने टूल्स आइफोनमा उपलब्ध गराएको छ । आइफोन ६ यताका हरेक मोडलमा यो फिचर उपलब्ध छ । आइफोनमा मात्र नभई आइप्याडमा पनि यो हेल्थ टूल पाउन सकिन्छ।
ब्याट्रीको स्वास्थ्य जाँचले दुईवटा कुराको जानकारी दिन्छ । एउटा maximum battery capacity available हाल तपाइँको आइफोनका ब्याट्रीमा उपलब्ध अधिकतम क्षमता र दोश्रो peak performance capability अर्थात् तपाइँको आइफोनको ब्याट्रीले हाल उच्चतम क्षमतामा काम गर्द कि गर्दैन भन्ने कुरा । आइफोनको ब्याट्रको स्वास्थ्य परीक्षणका लागिः
Settings मा जानुहोस् । स्क्रोल डाउन गरी Battery अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस् । तपाइँले क्भततष्लनक मेनूको सर्च बारबाटै सिधै Battery Settings मा पनि जान सक्नुहुन्छ । त्यहाँ रहेको Battery Health भन्ने अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाइँले आफ्नो आइफोनको ब्याट्रीको maximum capacity र peak performance capability देख्न सक्नुहुन्छ ।
यदि ब्याट्रीको स्वास्थ्य उल्लेख्य रुपमा गिरावट आएको छ वा आइफोनमा फेरिएको नयाँ ब्याट्रीलाई सिस्टमले भेरिफाइ नगरेको खण्डमा आइफोनमा महत्वपूर्ण ब्याट्री नोटिफिकेसनहरु एप्पलले उपलब्ध गराउने गरेको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
खुसीको खबर : टिकटक बनाउनेले अब पैसै पैसा पाउने, यसरी गर्नुहोस् मोनिट्राइज
आइफोन १३ मा स्याटेलाइट मोड, नेटवर्क नआउने स्थानमा पनि नेटवर्क
ट्राफिकको चिटमै क्यूआरकोड, मोबाइलबाटै जरिवाना तिर्न सकिने
राइट दाजुभाईले कसरि बनाएका थिए हवाइजहाज ? यस्तो छ राम काहानी
जीवनमा केही गरौँ गरौँ लाग्ने बनाईदिने महान १० भनाई पढ्नुहोस्